အမေရိကန်လေယာဉ်တင် သင်္ဘောလှည့်လည်သွားနေသည့်ဧရိယာတွင်တရုတ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်….( ဟိုဘက်က တကယ်မချသေးတော့ ဖင်ပုတ် ခေါင်းပုတ်နဲ့ သွေးတိုးစမ်းလာတာမျိုး လား ပေါက်ဖော် ) - Seekantipur.com
အမေရိကန်လေယာဉ်တင် သင်္ဘောလှည့်လည်သွားနေသည့်ဧရိယာတွင် တရုတ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်….( ဟိုဘက်က တကယ်မချသေးတော့ ဖင်ပုတ် ခေါင်းပုတ်နဲ့ သွေးတိုးစမ်းလာတာမျိုး လား ပေါက်ဖော် )
ထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနီး အမေရိကန်လေယာဉ် တင် သင်္ဘောတစ်စင်း လှည့်လည် သွားလာနေစဉ် …တရုတ်စစ်တပ်၏ တပ်ဖွဲ့များသည် ထိုင်ဝမ်ကျွန်း၏ အပေါ်စီးနေရာတွင် ရှိနေသည့် …ယင်းနိုင်ငံ၏ အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်လေယာဉ်ပစ်မှု ဆိုင်ရာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ထိုင်ဝမ်ကျွန်းသည် ယခုအခါ ဝါရှင်တန်နှင့်ပေကျင်းအကြား ရန်စောင်မှု ၏ ဗဟိုချက်တစ်ခု ဖြစ်လာနေပါတယ်။
နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်း Guangdong ပြည်နယ်တွင် တရုတ် တပ် ဖွဲ့ဝင်များ အကြီးစား လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး လေ့ကျင့်မှုများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ဗီဒီယိုပုံရိပ်တစ်ခုကို တရုတ်စစ်တပ်နှင့် အချိတ်အဆက်ရှိ မီဒီယာ တစ်ခုကသြဂုတ် ၁၀ ရက်တွင် ထုတ်လွှင့်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများတွင် ၃၅ မမPGZ-09 နှင့် ၂၅ မမ PGZ-95 လေယာဉ်ပစ်အမြှောက်များကဲ့သို့ အဆင့်မြင့်လက်နက်စနစ်များ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ယခုစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများသည် …နယ်မြေအနီးအနား၌ အမေရိကန်စစ်တပ်၏လှုပ်ရှားမှုများ မြင့်တက်နေစဉ်ယင်း၏ နယ်မြေပိုင်နက်ကို ကာကွယ်လိုသည့် တရုတ်၏ သဘောဆန္ဒကို ပြသခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုကိုးကား၍ သြဂုတ် ၁၂ ရက်တွင်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ သတင်းစာဂလိုဘယ်လ်တိုင်းမ်က ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ထို့ပြင် တောင်တရုတ်ပင်လယ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အစီအစဉ်အဖွဲ့က လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသောအမေရိကန်၏ လေကြောင်းနှင့်ရေကြောင်း လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်
နီမစ်ဇ် အတန်းအစား အမေရိကန် လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ယူအက်စ်အက်စ်ရော်နယ်ရေဂင် သည် သြဂုတ် ၈ ရက်ကတည်းကထိုင်ဝမ်အနီး လှည့်လည်နေခဲ့ပြီး အနီးအနားရှိအရှေ့တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဦးတည်ခုတ်မောင်းသွားသည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြောင်း သြဂုတ် ၁၂ ရက်တွင် တရုတ် think tank (နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အကြံပေးအဖွဲ့) က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အမရေိကနျလယောဉျတငျ သင်ျဘောလှညျ့လညျသှားနသေညျ့ဧရိယာတှငျ တရုတျစဈရေးလကေ့ငျြ့မှု ပွုလုပျ….( ဟိုဘကျက တကယျမခသြေးတော့ ဖငျပုတျ ခေါငျးပုတျနဲ့ သှေးတိုးစမျးလာတာမြိုး လား ပေါကျဖျော )
ထိုငျဝမျကြှနျးအနီး အမရေိကနျလယောဉျ တငျ သင်ျဘောတဈစငျး လှညျ့လညျ သှားလာနစေဉျ …တရုတျစဈတပျ၏ တပျဖှဲ့မြားသညျ ထိုငျဝမျကြှနျး၏ အပျေါစီးနရောတှငျ ရှိနသေညျ့ …ယငျးနိုငျငံ၏ အရှတေ့ောငျပိုငျးတှငျလယောဉျပဈမှု ဆိုငျရာ စဈရေးလကေ့ငျြ့မှုမြားကို လုပျဆောငျခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။
ထိုငျဝမျကြှနျးသညျ ယခုအခါ ဝါရှငျတနျနှငျ့ပကေငျြးအကွား ရနျစောငျမှု ၏ ဗဟိုခကျြတဈခု ဖွဈလာနပေါတယျ။
နိုငျငံအရှတေ့ောငျပိုငျး Guangdong ပွညျနယျတှငျ တရုတျ တပျ ဖှဲ့ဝငျမြား အကွီးစား လကွေောငျးရနျ ကာကှယျရေး လကေ့ငျြ့မှုမြား လုပျဆောငျနသေညျ့ ဗီဒီယိုပုံရိပျတဈခုကို တရုတျစဈတပျနှငျ့ အခြိတျအဆကျရှိ မီဒီယာ တဈခုကသွဂုတျ ၁၀ ရကျတှငျ ထုတျလှငျ့ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါ စဈရေးလကေ့ငျြ့မှုမြားတှငျ ၃၅ မမPGZ-09 နှငျ့ ၂၅ မမ PGZ-95 လယောဉျပဈအမွှောကျမြားကဲ့သို့ အဆငျ့မွငျ့လကျနကျစနဈမြား ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
ယခုစဈရေးလကေ့ငျြ့မှုမြားသညျ …နယျမွအေနီးအနား၌ အမရေိကနျစဈတပျ၏လှုပျရှားမှုမြား မွငျ့တကျနစေဉျယငျး၏ နယျမွပေိုငျနကျကို ကာကှယျလိုသညျ့ တရုတျ၏ သဘောဆန်ဒကို ပွသခဲ့ခွငျး ဖွဈကွောငျး အမညျမဖျောလိုသူ ကြှမျးကငျြပညာရှငျမြားကိုကိုးကား၍ သွဂုတျ ၁၂ ရကျတှငျတရုတျကှနျမွူနဈပါတီ သတငျးစာဂလိုဘယျလျတိုငျးမျက ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
ထို့ပွငျ တောငျတရုတျပငျလယျ စုံစမျးစဈဆေးရေး အစီအစဉျအဖှဲ့က လုပျဆောငျလကျြရှိသောအမရေိကနျ၏ လကွေောငျးနှငျ့ရကွေောငျး လှုပျရှားမှုမြားအပျေါ
နီမဈဇျ အတနျးအစား အမရေိကနျ လယောဉျတငျသင်ျဘော ယူအကျဈအကျဈရျောနယျရဂေငျ သညျ သွဂုတျ ၈ ရကျကတညျးကထိုငျဝမျအနီး လှညျ့လညျနခေဲ့ပွီး အနီးအနားရှိအရှတေ့ရုတျပငျလယျသို့ ဦးတညျခုတျမောငျးသှားသညျကို မွငျတှခေဲ့ကွောငျး သွဂုတျ ၁၂ ရကျတှငျ တရုတျ think tank (နိုငျငံရေး၊ စီးပှားရေး အကွံပေးအဖှဲ့) က ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။
The full moon day of the Buddhist people, and the festival, donating saffron as the traditional culture, isalovely tradition
|Powerful Weight Loss Pill For Men|Arnica Infused Cbd Oil